Maqaallada Patrick Tripp ee Martech Zone |
Maqaallada by Patrick Trip
Patrick Tripp wuxuu u keenayaa 17 sano oo khibrad ah tikniyoolajiyadda, la-tashiga iyo suuq-geynta kaalintiisa madaxweyne ku-xigeenka istiraatiijiyadda wax soo saarka ee Suuqgeynta Suuqgeynta Kala Duwan ee RedPoint Global. Markii hore, Patrick wuxuu mas'uul ka ahaa emaylka iyo istiraatiijiyadda suuq-geynta suuq-geynta ee Adobe. Intaas ka hor, wuxuu horseeday istiraatiijiyad xallinta waqtiga dhabta ah ee xallinta suuq-geynta shirkadda Neolane, oo Adobe ay heshay 2013.
Khamiis, Janaayo 12, 2017 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Patrick Trip
Si ka duwan buufinnada iyo xanjada xumbada, Martech ma qarxi doono markii loo kordhiyo waxa u muuqda dhibic jaban. Taabadalkeed, warshadaha Martech ayaa sii wadi doona rogista iyo fidinta oo la jaanqaadaya isbeddelka iyo hal-abuurnimada-sidii loo qabtay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxay u muuqan kartaa in kobaca warshadaha ee hadda uusan aheyn mid lagu sii jiri karo. Kuwo badan ayaa isweydiiyay in warshadaha martida - oo ay ka xumaadeen in ka badan 3,800 xal — ay ku dhacday dhibicdeeda. Jawaabteena fudud: Maya, ma ahan. Cusbooneysiintu maaha